पूर्वराजाको भ्रमण सुराकीलाई हैरान :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
पूर्वराजाको भ्रमण सुराकीलाई हैरान
काठमाडौं । नेपालगन्जलाई मुकाम बनाएर पश्चिम नेपालको भ्रमणमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक चलखेल सुरु गरेका छन् । तर उनको चलखेल कुन उद्देश्यका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुनसकेको छैन । भ्रमणमा निस्कनुभन्दा तीन दिनअघि शाहले पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई आफ्नै निवासमा डिनर खुवाएका थिए भने त्यसको भोलिपल्ट राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणालाई बोलाएर डिनर दिएका थिए । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई भने उनले नेपालगन्जमै बोलाएर भेटघाट गरेका छन् ।
पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा यतिबेला तीन टुक्रामा विभिाजित छन् । यी तीन वटा टुक्रालाई लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा एउटै छातामुनि ल्यउने पहिलो प्रयास पूर्वराजा शाहको छ । तर उनको पश्चिम नेपाल भ्रमण यतिमा मात्रै सीमित छैन । मुलुकको राजनीति सरलरेखामा अघि बढ्यो भने अबको पाँच वर्ष स्थायी सरकार बन्ने र त्यो अवधिमा मुलुकले आर्थिक विकासमा धेरै नै फड्को मार्ने अवस्था छ । पाँच वर्ष स्थायी सरकार चल्यो र मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्यो भने राजतन्त्र पुनर्बहालीको सम्भावना समाप्त हुने कुरामा पूर्वराजा शाह सचेत छन् । मुलुकको राजनीतिलाई सरलरेखामा अघि बढ्न नदिने अभियानअन्तर्गत नै पूर्वराजा शाह पश्चिम नेपाल गएको समाचार स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग धनगढीको कुनै होटलमा गोप्य भेटघाट गर्ने योजना भ्रमणअघि नै तय गरिएको सूचना फैलाइएको थियो । तर भेटघाटमा उनी नआएर उनले आफ्ना प्रतिनिधिलाई पठाएको दाबी गरिएको छ ।
पूर्वराजा शाहले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव तथा उनका मान्छेहरू, रेशम चौधरी र उनका मान्छेहरूलाई पनि नियमितजसो भेटिरहेको अनुमान नेपाल प्रहरीले गरेको छ । पूर्वराजा शाह कहाँ कहाँ जान्छन् ? क–कसलाई भेट्छन् ? भन्ने सूचना एक एक घन्टामा पेस गर्न गृह मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका प्रहरी तथा सिडिओहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर पूर्वराजा शाहको टिमले प्रहरीलाई नराम्ररी छक्याउने गरेको छ । एक ठाउँमा भ्रमण गर्न जाने भनेर प्रहरीलाई सूचना दिने, तर पूर्वराजा शाह भने फुत्त अर्को ठाउँको भ्रमणमा निस्कने गरेपछि प्रहरी हैरान भएको छ ।
Tarun Khabar0response बिहिबार,२७ पुष २०७४ 147 Views